1-1 /4"150 ပေါင်ပျော့သွန်းသံပိုက်လျောက်ပတ်ချည်အနားကွပ် - တရုတ် Hebei Jinmai ကာစ်
SCH 40 သံမဏိပိုက်လျောက်ပတ် BS ပေါင်းလိုက်သောပိုက်နို့သီးခေါငျး
High Quality အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး Black က Surface ကိုသံမဏိပိုက် ...
စက်ရုံ High Quality Threaded ပျော့သံ Pi ... သို့ကာစ်
High Quality ပျော့သံပိုက်အဝတ်အစားအစမ်းဝတ် lareral Y ကိုခ ...
အမေရိကန်နျ Standard Precision သံပိုက် Fittings Casting
ဝေးသောသွပ်ရည်စိမ်ပျော့ Cast ကိုသံရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ Pi ...
အွန်လိုင်းစျေးဝယ်အကောင်းဆုံးပျော့သံဓါတ်ငွေ့ P ကိုအားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး ...
NPT နျ Standard လျောက်ပတ်ပျော့သံပိုက်အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး ...
ပျော့သွန်းသံ din သငျ့ပိုက်အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး
စံဟာ့ဒ်ဝဲပူသွပ်ရည်စိမ်ပျော့ ir နှစ်ပြီးသော ...
တရုတ်စက်ရုံ Sch40 ဂဟေသံမဏိ Pip မှစ. တိုက်ရိုက်ဝယ်ပါ ...
1-1 /4"150 ပေါင်ပျော့သွန်းသံပိုက်လျောက်ပတ်ချည်အနားကွပ်
Hebei, တရုတ် (ပြည်မကြီး),
ဦးခေါင်း Code ကို:
gi & အနက်ရောင်
ပူပြင်းတဲ့နှစ်ပြီးသော gi, လျှပ်စစ် gi, မုန့်ဖုတ် gi
ရေ, ဓာတ်ငွေ့, ရေနံသိရှိစေရန်
2000 တစ်လလျှင် Metric Ton / မက်ထရစ်တန်ချိန် 25000tons / တစ်နှစ်လျှင်
1) က Surface: 1-1 /4"150 ပေါင်ပျော့သွန်းသံပိုက်လျောက်ပတ်ချည်အနားကွပ်
2) အရောင်းသွက်: ရိုးရိုး, ပုတီးဝေးသော
စီးရီး: မိုးသည်းထန်စွာ, အလယ်တန်း, အလင်း ...
3) Size: 1/8 "-6" တန်းတူညီမျှခြင်းနှင့်လျှော့ချ
4) စံ: အမေရိကန်စံ, ဗြိတိသျှစံ, ဒင်စံ
5) လက်မှတ်: ISO9002 & BV
6) အသုံးပြုမှု: ပိုက်လိုင်းများမှကျယ်ပြန့်ချိတ်ဆက်ပျော့သံ extension ကို piecesare မီဒီယာအဖြစ်ရေ, သဘာဝဓာတ်ငွေ့, လေ, ရေနံ, Insight web studio ၏သိရှိစေရန်
7) Tthread ။
ပစ္စည်းများ: ANSI / ASME / A197-79
dimensions: ANSI / ASMEB16.3-85
Malleble သံပိုက် fittings
ထို့နောက်အတွင်းစိတ် 1) ပလပ်စတစ်အိတ် တစ်ဦးစက္ဏူထူ (470mmx305mmx195mm) သို့မဟုတ် ခစက္ဏူထူ (305mmx240mmx195mm)
2) pallet နှင့်အတူပုံးထဲမှာ
1) ရှည်လျားသောသမိုင်း: 1994 ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်
2) အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်အော်တို produt လိုင်း
3) ISO9001 & BV လက်မှတ်
4) အမျိုးမျိုးသောပျော့သံပိုက် fittings နှင့် Ling ပလပ်စတစ် fittings
5) coustomers '' ရေးဆွဲသို့မဟုတ်နမူနာအဆိုအရအမျိုးမျိုးသောပျော့သံပိုက် fittings ထုတ်လုပ်နိုင်သည်
3) ထုပ်ပိုး: newandstrongseaworthypacking; asbuyer'sspecialrequest
6) ကမ်းလှမ်းမှုကို servicein24hoursx365days
HEBEI JINMAI Cast သင်တို့အဘို့ awise ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်
အော်တို B.advancedproductionequipmentandtechnology, suchasautomaticproductline,
လိုင်း tunneltypeannealingfurnaceandexacttestinginstrumentandsoon ။
inquality, varietyandpromptdelivery, whichisknownovertheworld ။
ယခင်: ပျော့သွန်းသံပိုက်အနားကွပ်, အနက်ရောင်သံပိုက်အနားကွပ် adapter
နောက်တစ်ခု: Black ကသံမဏိစုံတွဲများနှင့်အသုံးပြုမှုပျော့သံပိုက်အဝတ်အစားအစမ်းဝတ်
1/2 '' Black ကသံပိုက်အနားကွပ် DIY ပိုက် ...
အနားကွပ်ပေါင်းလိုက်သော GI သံပိုက်
အနက်ရောင်သံပိုက်တင်းပါး fittings အနက်ရောင်ကုန်တိုက် welded ...
Hebei Jinmai Co. , Casting, Ltd မှတက်ရောက်ရန်ပါလိမ့်မယ် ...
အဆိုပါ 124th Canton တရားမျှတသောအောက်တိုဘာလ 15 ရက်နေ့တွင်ကွမ်ကျိုးတှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည်, Ltd ကုမ္ပဏီ Casting 2018. Hebei Jinmai ဟာပျော့သံပိုက်လျောက်ပတ်စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ဦးဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုက် fittings qual တိကျခိုင်မာစွာခံကြပါပြီ ...
ပိုက်,fအတွက်အကောင်းဆုံးဝယ်အခွင့်အလမ်း ...
ဘယ်အချိန်မှာတရုတ်ထံမှပိုက် fittings ဝယ်ယူရန်ဈေးအပေါဆုံးဖြစ်သနည်း ဘယ်အချိန်မှာတရုတ်ထံမှပိုက် fittings ၏အမြန်ဆုံးပေးပို့ပါသနည်း အဖြေဇူလိုင်လကနေစက်တင်ဘာလမှပါ! ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှဝယ်ယူသူတို့ရဲ့ရှိသည်ဟုယုံကြည်နေသည် ...
Co. , Ltd မှပါဝင်ဆောင်ရွက် Casting Hebei Jinmai ...
Hebei Jinmai Casting Co. , Ltd တက်ကြွစွာ Hebei အီလက်ထရောနစ်ကွန်ယက်ကုန်သွယ်ရေးအစည်းအရုံးကစီစဉ်သည့် 4th တစ်ရာတပ်ရင်းတိုက်ပွဲပါဝင်ခဲ့။ 70 ကျော်နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုပို့ကုန်ကုမ္ပဏီများမှစွမ်းဆောင်မှုတစ်ခုများအတွက်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် ...